Ny MRI amin'ny glandy misy jiro mitovitovy
Ny MRI amin'ny glandy misy contrat - ny fandinihana ny tapany mifandraika amin'ny loha, izay ahafahana mamaritra ny aretina mety amin'ny mari-pahaizana ambony, ary koa mba handinihana amin'ny antsipiriany ny rafitra anatomika misy ny taova lehibe. Ny fehin-kevitra dia alefa ho an'ny ahiahin'ny tumor iray na ny aretina Isenko-Cushing , izay miseho amin'ny endriky ny fihanaky ny hominera, ny matavy ary ny diabeta. Ankoatra izany, dia aseho amin'ny fampiharana ny fihenan'ny tosi-drà, izay voamarina amin'ny fitsapana ny ra.
Fiomanana ho an'ny MRI ao amin'ny andrin-jiolahy misy fifanoherana
Ity ampahany amin'ny fomba fitsaboana ity dia manazava ny fisian'ny fiheverana mahazatra amin'ny fantsom-pitantanana - fifanoherana. Mba hanaovana izany, dia makà ohatra iray mampiseho ny fahatsapana ny zava-mahadomelina. Aorian'izany dia alefa ny vahaolana manokana 30 minitra alohan'ny fiantombohan'ny fepetra. Matetika izy io no miverina indray mandeha. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fifanoherana dia omena amin'ny alalan'ny dipoavatra mandritra ny dingana famaranana.
Ho an'ny dingana, matetika dia mangataka ny hanao akanjo manokana. Raha tsy manana bokotra metaly na tselatra ny akanjo mahazatra amin'ny marary, ary atao amin'ny fehezana maimaim-poana-afaka manao izany koa ianao.
Ora vitsivitsy mialoha ny fianarana dia maniry ny tsy hiala amin'ny sakafo, izay hanafoana ny mety ho fiantraikany hafa, toy ny tsy fahampian-tsakafo na ny biriky. Raha fantatry ny marary, tokony hilaza amin'ny dokotera izy fa misy ny asmaty sy ny tsy fahasalamana mifanohitra amin'izany.
Ahoana ny fahasamihafan'ny MRT misy contrat?
Ny fandinihan-tsakafo amin'ny famantaranandro dia misy fiantraikany eo amin'ny faniriana ihany, fa koa ny faritra akaiky indrindra. Sarotra ny mahita ny fiovana amin'ity vatana ity. Noho izany, sary manokana miaraka amina famaranana farafahakeliny no ampiasaina. Ny fizotry ny fanandramana ny fisidinan'ny gripa dia tsy mitovy amin'ny fanandraman'ny atidoha.
Ny MRI dia tanterahana amin'ny fitaovana manokana. Mba hahatonga ny zava-drehetra miasa tsara, dia mila manaisotra tanteraka amin'ny zavatra metaly medikaly ianao, anisan'izany ny piercings sy ny prostheses.
Ny olona dia napetraka ao anaty ety fisaka miaraka amin'ny fanamafisana feno ny lohany. Matetika adiny iray eo ho eo ny fandidiana rehetra.
Fanandramana mikasika ny fanadihadiana
Misy toe-javatra vitsivitsy izay tsy vitan'ny fanatanterahana ny fitsaboana MRI ao amin'ny atidoha ara-pahasalamana amin'ny fanoherana:
Ny fisiana eo amin'ny lohan'ny metaly izay tsy azo esorina: takelaka, faniry ary hafa;
Hetsi-panoherana an-tsehatra amin'ny clips avy amin'ny metaly;
fanatanjahan-tena sy fitaovana hafa;
Fitrandrahana ferromagnétique amin'ny sofina afovoany.
Ankoatra izany, misy ny fihetsika mifanohitra amin'izany:
Ny ampahany metaly ao amin'ny vatana izay tsy ilaina hotsinjovana;
Tattoo amin'ny ranomainty misy kofehy metaly;
ny tsy fahombiazan'ny fo.
Hemangioma amin'ny valan'aretina - fitsaboana
Eksitera avy amin'ny migraine
Keratoconus - fitsaboana
Nahoana no voa maina ny voa?
Lollipops ho an'ny kohaka
Ny fanaintainana fanaintainana eo amin'ny faritra misy ny fo
Ny fandatsahan-drà - ny fanampiana voalohany
Ny fibirillation atriale - fitsaboana
Ahoana no hanasitranana ny androbe mandrakizay?
Omeprazole - inona no manasitrana, ahoana no atao?
Ny aloaky ny vava - ny antony
Fanjonoana amin'ny tsindry - soritr'aretina
Fashion druckt lohataona-fahavaratra 2013
Fiovana marary amin'ny aty sy ny pancreas
Zavakanto maoderina ho an'ny zazalahy
Ny hatsaran 'ny hatsaran-tarehin'i Kendall Jenner dia misalasala
Underground eo ambanin'ilay parquet - fomba fisafidianana ny tsara indrindra, avereno jerena ireo safidy malaza indrindra
Recipe fandosirana ao an-trano
Amal Clooney bevohoka?
Daty - kaloria
Sofa ho an'ny lakozia
Ahoana no ahitanao ny lakandranon'i dipoavatra?
19 fahatsiarovana, izay tsy ahafahan'ireo firenena ireo miverina
Lamaody miloko fijerena jiro 2016
Fombafomba amin'ny volana mihetsiketsika
Bendji Madden dia miresaka momba ny fitiavan'i Cameron Diaz ny daty nahaterahany
Birao ordinatera kely
Inona no kitapo mitafy amin'ny zaridaina?
Sakafo ao Montignac
Famolavolana rafitra ho an'ny lakozia